Archive du 13-oct-2021
Mihalalina ny krizy Ny mpitondra fanjakana sisa tsy migrevy
Sesilany ny fitakiana sy fitokonana etsy sy eroa eo anatrehan’ny tsy fananan’ny Fanjakana vahaolana matotra sy maharitra,
Tsy lavina ny fisiana hetsika samihafa ataon’ny Filoha sy ny fitondram-panjakana ankehitriny, izay miezaka mamorona zavatra mila ho isan’andro hanaovana sehoseho.
Fitateram-bahoaka Andoharanofotsy Nitokona ny KOFITA, fiara 10 sisa no niasa
Nitokona ny mpamily sy ny mpanampy azy amin’ny zotra KOFITA ( Koperativa Fitaterana Tantsaha) mampitohy an’Andoharanofotsy amin’Ambohijanaka omaly maraina
Anjanadoria Ambohidratrimo Trano 22 tafo no may, olona miisa 81 no traboina
Trano 22 tafo no may tsy nisy noraisina tao amin’ny fokontany Manankasina, kaominina Anjanadoria Ambohidratrimo ny alin’ny alatsinainy teo, raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana omaly.
Anosibe-Anosizato Sasatry ny mandona olona ny moto sy ny bisikileta
Efa ho 12 volana izao no tsy nirehitra intsony ny jiro amin’ny sisin-dalana eny amin’iny faritra Anosibe sy Anosizato iny raha araka ny fanadihadiana natao.
Mpanao gazety - “Cellule de crise” “Hanangana rafitra mahaleo tena izahay”
Arakaraka ny maha atomotra ny fotoana voatondro hanaovana ny fifidianana izay ho Filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM) ny sabotsy 16 oktobra izao no vao mainka mihalalina ny tsy fitovian-kevitra.
Loza tany Ankaramena RN7 Maty ilay zaza 9 taona, maty avokoa izy 4 mianaka
Tovovavy kely iray isan’ireo tra-doza tamin’ilay loza mahatsiravina tany Ankaramena ny alatsinainy maraina teo no nanaovana antso avo no notsaboina tao amin’ny CHU Tambohobe Fianarantsoa.
Niala moto Nifatratra tamin’ny rindrin’olona ilay kamiao
Kamiao be iray niala mpitondra moto nifatratra tamin'ny rindrin'olona, omaly, tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, tamin'iny lalam-pirenena faharoa mihazo an'Ambohimangakely iny Tsy nisy ny aina nafoy
Vola 4 gony very Tratra tany Toliara ireo nandroba ny BNI Andohanilakaka
Nisehoana fandrobana mitam-piadiana tao amin’ny BNI Andohanilakaka, faritra Ihorombe afak’omaly alina . Lehilahy 02 sy vehivavy 01 no tompon'antoka tamin’ny fanafihana.